Home Wararka Gudaha Page 3
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo ka qeyb galay munaasabad lagu xusayay 1-dii Luulyo ee gobolladii koofureed ay ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga, isla maalintaana ay midoobeen gobolladii...
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xusaya sannad-guurada 62-aad ee xornimada iyo midnimada dalka, ayaa ubax dhigey taalada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo ay wehliyeen Madaxda goleyaasha...
QM oo sheegay in ay go’an tahay sii wadista taageerada ay u fidiso Soomaaliya
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa shacabka iyo dowladda Soomaaliya ugu hambalyeynaya sannadguurada 62-aad ee ka soo wareegatay madaxbannaanida dalkooda. James Swan ayaa...
Xasan Sheikh Oo Ka Qayb Galay Munaasabadda 1-Da Luuliyo
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qeyb galay xuska sannad guurada 62-aad ee ka soo wareegtay markii ay ka xoroobeen Gobollada Koonfureed ee dalka gumeystihii Talyaaniga iyo midnimadii labada...
Laftagareen ” Soomaaliya waxay gashay gumeysi qarsoon”
– Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafatagareen oo Xalay hadal ka jeediyey xaflad loogu dabaal dagayey 1-da Luuliyo oo lagu qabtay Baydhabo ayaa sheegay in xilligii Soomaaliya ay...
Gudaha radiohalgan.com - June 30, 2022 0
Waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay jogaan ugu hambayeeynayaa munaasabadda 1-da luulyo oo ku beegan sanad guurada 62aad ee kasoo wareegtay xurriyadii Gobollada Koonfureed iyo Israacii Gobollada Waqooyi...
Gudoomiyaha Xisbiga Daldhis Mudane Cabdiraxmaan Xuseen Caddow ayaa hambalyo ku aadan 62 sano guurada ka soo wareegtay markii Shacabka Soomaaliyeed xoriyadooda ay dib heleen iyo dhisidii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1-da Luuliyo 1960-kii...
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamarreeb ee caasimadda Dowladda Galmudug oo uu uga maqnaa safaro shaqo. Qoorqoor iyo wafdigiisa ayaa si...
Gudaha Beledweyne Hiiraan - June 30, 2022 0
– Guddoomiyaha dugsiyada Hoyga Xamar Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud ayaa ka hadlay khilaafka ka taagan dhulka iskuulkaas ee ku yaalla degmada Hodan, gaar ahaan agagaar madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasin. Guddoomiye Cabdiraxmaan ayaa shaaciyey magacyada...
– Taliska ciidamada Booliska HirShabelle oo kaashanayaa saraakiisha milatariga ee ka howlgala deegaanada maamulkaas ayaa si wadajir ah howlgal uga sambeeyey gobolka Shabeelaha Dhexe, waxayna ku qaadeen isbaarooyin dhowr ah. Howlgalka ayaa...
Sawirro: Sidee Xasan loogu soo dhoweeyey Abu Dhabi?